တရုတ်ပရင်တာမှင်ပုလင်းပလပ်စတစ်ဆလင်ဒါပြားပြားခရမ်းလွန်ပရင်တာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Maishengli
ကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာ - ကြီးမားသောအရွယ်အစားသေးငယ်သောခရမ်းရောင်အပြားပြားပရင်တာပရင့်တာသည်တစ်ချိန်တည်းတွင် roraty နှင့်ပြားချပ်ချပ်ကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရောင်များ၊ အဖြူနှင့်အရောင်တင်များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ မှန်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်နောက်ပုံနှိပ်ခြင်းတွင်လည်းအထောက်အပံ့ပေးသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှု၏။
မော်ဒယ် M -9060W ခရမ်းလွန်ဆလင်ဒါ + လေယာဉ်ပရင်တာ
အသွင်အပြင် မီးခိုးရောင် - အလယ်အလတ်မီးခိုးရောင်ပိတ်ဆို့
မင်အမျိုးအစား ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အဖြူရောင်၊ အနီ၊ အနက်ရောင်၊
ပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်း (spm / h) dpi i3200u 4720
ပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်း (spm / h) 720x600 dpi (4PASS) 10m2 / h ၉ မီတာ / ဇ
720x900dpi (6PASS) 8m2 / ဇ ၇ မီတာ / ဇ
720x1200dpi (8PASS) ၆ မီတာ / နာရီ ၅ မီတာ / နာရီ
အကျယ်ပုံနှိပ်ပါ 940mm x 640mm
အထူပုံနှိပ်ပါ ပြားပုံနှိပ်ခြင်းအထူ 0.1mm * 400mm
ဆလင်ဒါပုံနှိပ်ခြင်းအချင်းမှာ ၂၀ မီလီမီတာမှ ၂၀၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်
ပုံပုံစံ TIFF / JPG / EPS / PDF / BMPW
Rip ဆော့ဝဲ ဓာတ်ပုံ
ပစ္စည်းအမျိုးအစား ကြော်ငြာပစ္စည်းများအမျိုးမျိုး။ အလှဆင်နှင့်ဆက်စပ်သောစီးရီးပစ္စည်းများ, သတ္တုပြား, ဖန်,
သစ်သားဘုတ်၊ အထည်၊ ပလပ်စတစ်၊ လက်ကိုင်ဖုန်းအိတ်၊
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ AC220V 50HZ ± ၁၀%
အပူချိန် 20-32 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အသွင်အပြင်အရွယ်အစား (mm) အရှည် / အကျယ် / အမြင့် 2065mm / 1180mm / 1005mm
အထုပ်အရွယ်အစား အရှည် / အကျယ် / အမြင့် 2220mm / 1360mm / 1210mm
ဒေတာပေးပို့ခြင်း TCP / IP ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု
ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်။ ကယ်ဆယ်ခြင်းအလွှာ၊ အရောင်အလွှာနှင့်အလင်းအလွှာ။ ခိုင်ခံ့သောပုံနှိပ်ကော်၊ ခြစ်ရာခုခံနိုင်မှုနှင့် ၀ တ်ဆင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
တစ်ခုတည်း nozzle တွင်းအရေအတွက်: 1440 (အတန်းတစ်ခုစီအတွက် 180, စုစုပေါင်း 8 တန်း),
မှင်ကျသောအရွယ်အစား: 5pl, ပိုမိုမြင့်မားသောပုံနှိပ်ခြင်းတိကျမှန်ကန်မှု
Transmission beam လမ်းညွှန်မီးရထားလမ်းဖြတ်ကူးရောင်ခြည်ကို aluminium beam X အမှတ်အသားပြုထားသည်။ X axis ကို Japan THK ၏နှစ်ထပ် linear လမ်းညွှန်ဂီယာစက်မှအာမခံသည် ပုံနှိပ်နေစဉ်အတွင်းမှင်သည့်အရာတစ်ခုသည်ပိုမိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည်
၁။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုခရမ်းလွန်ပြားပြားပရင်တာများအသုံးပြုခြင်းသည်ပုံနှိပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသောအချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့အတွက် bai အော်ပရေတာများသည်လုပ်ငန်းစတင်ရန်ပိုမိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်းများတက်ရမည်၊ သို့မှသာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်ခရမ်းလွန်ပြားပြားပရင်တာများကိုဝယ်ယူသောအခါ၎င်းတို့သည်ထုတ်လုပ်သူများထံမှသက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုလမ်းညွှန်နှင့်စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
2. Coating treatment ပုံနှိပ်ထားသောပစ္စည်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်ပုံ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာပုံနှိပ်နိုင်ရန်အထူးဖုံးအုပ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အပေါ်ယံပိုင်း၏ကုသမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအချက်သည်ယူနီဖောင်းဖြစ်ရမည်၊ သို့မှသာအဖုံးသည်တစ်ပုံစံတည်းအရောင်တူနိုင်မည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာရောစပ်။ မရသောမှန်ကန်သောအပေါ်ယံလွှာကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်၎င်းကိုလက်ဖြင့်သုတ်ခြင်းနှင့်ပက်ဖြန်းခြင်းအဖြစ်ခွဲထားသည်။
(၃) ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သုံးသောခရမ်းလွန်ပြားပြားပရင်တာများသည်အထူးသဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများကရောင်းချသောအထူးခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ UV မှင်အရည်အသွေးသည်ပုံနှိပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိစေပြီးမတူညီသောနင့်ဖလက်များရှိစက်များအတွက်မတူညီသောမှင်များကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ထုတ်လုပ်သူထံမှတိုက်ရိုက်ဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူမှအကြံပြုထားသောမင်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံး။ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ခရမ်းလွန်မှင်ထုတ်လုပ်သူများသည်အမျိုးမျိုးသောချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသောကြောင့် nozzle အတွက်သင့်လျော်သော link များရှိသည်။
၄။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရမည့်ပစ္စည်းများစာရွက်၏အော်ပရေတာ၏နားလည်မှုသည်ပုံနှိပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ခရမ်းလွန်မှင်ကိုယ်တိုင်သည်ပုံနှိပ်သည့်ပစ္စည်းနှင့်ဓာတ်ပြုပြီးအချို့သောရာခိုင်နှုန်းကိုထိုးဖောက်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အော်ပရေတာရဲ့ပုံနှိပ်ပစ္စည်းနှင့်အကျွမ်းတဝင်နောက်ဆုံးပုံနှိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သတ္တုများ၊ ဖန်ခွက်များ၊ ကြွေထည်မြေထည်များ၊ သစ်သားပြားများနှင့်အခြားမြင့်မားသောသိပ်သည်းဆပစ္စည်းများ၊ မင်ကိုထိုးဖောက်ရန်ခက်ခဲသည်, ထို့ကြောင့်သူကအပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ကုသရမည်ဖြစ်သည်
ပဉ္စမအချက် - ရုပ်ပုံ၏ကိုယ်ပိုင်အချက်များခရမ်းလွန်ပြားပြားပရင်တာတွင်ပြproblemနာလုံးဝမရှိသည့်အခါ၎င်းသည်ပုံနှိပ်ထားသောပုံ၏ပင်မအချက်ဟုတ်မဟုတ်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ရုပ်ပုံ၏သာမာန် pixel များရှိပါကပုံနှိပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းရှိရမည်မဟုတ်ပါ။ ။ ရုပ်ပုံသည်သန့်စင်ပြီးဖြစ်သော်လည်းအရည်အသွေးမြင့်သောပုံနှိပ်ခြင်းရလဒ်များကိုမရရှိနိုင်ပါ။
သစ်သား၊ သတ္တုပြား၊ ၀ ါး fiberboard၊ ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကြက်၊ စက္ကူ၊ သားရေ၊ နောက်ခံပုံ၊ အထည်၊ ကျောက်၊ PVC၊ ကော်ဇော၊ Chevron ဘုတ်၊ သို့မဟုတ် pvc ရေပိုက်စသည်တို့
အဓိကအင်္ဂါရပ် ၅ ခု:
2. နှစ်ဆအနုတ်လက္ခဏာဖိအားထောက်ခံမှု။ ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရောင်မရှိခြင်းမှကာကွယ်ပါ။
၃ ။ ပုံနှိပ်နည်းအမျိုးမျိုးကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။
အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးပြည့်စုံသောပုံနှိပ်ခြင်းသေချာစေရန် 4.Fine အစိတ်အပိုင်းများ။
5. High-Tec ပေါင်းစပ်ထားသောအဓိကဘုတ်၊ ပရင်တာလည်ပတ်ရန်အဆင်ပြေသည်။
ရိုးရာပိုးပုံနှိပ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အခြား zhi ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည်ရှုပ်ထွေးပြီးရုပ်ရှင်၊ မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ပြားပြားပုံနှိပ်ခြင်းသည်ပစ္စည်းများကိုစားပွဲပေါ်တင်ရန်သာလိုအပ်ပြီးကွန်ပျူတာမှစတင်ပုံနှိပ်သည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသဘောပေါက်သည်၊ စစ်ဆင်ရေးသည်ရိုးရှင်းပြီးလူတစ် ဦး တည်းသာထိန်းချုပ်သည်။ ပုံနှိပ်ကုန်ကျစရိတ်4ယွမ်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့သို့ လူကြိုက်အများဆုံး rotary ခရမ်းလွန်ပြားပြားပုလင်းပရင်တာစက်
နောက်တစ်ခု: အိတ်ဆောင် Multi အရွယ်အစားခရမ်းလွန်ပရင်တာအိတ်ခ်ျတီဘီပြားပြားပုံနှိပ်စက်နှင့် Flat နှင့် Cylinder ပုလင်းကယ်ဆယ်ရေး 3D ဖောင်းကြွမှုအတွက် Rotary နှင့်အတူ
အဘယ် UV ပရင်တာတွင်မည်သည့်ပစ္စည်းများပုံနှိပ်နိုင်သည်။
သားရေ၊ သစ်သား၊ ပလပ်စတစ်၊ acrylic၊ ဘောပင်၊ ဂေါက်သီးဘောလုံး၊ သတ္တု၊ ကြွေထည်၊ ဖန်၊ အထည်နှင့်အထည်စသည်တို့ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများအားလုံးနီးပါးပုံနှိပ်နိုင်သည်။
LED ခရမ်းလွန်ပရင်တာက 3D အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံနှိပ်ပေးနိုင်သလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည်ဖောင်းကြွ 3D အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်၍ ဗွီဒီယိုများကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။
စက်ကိုမသုံးမီ ကျေးဇူးပြု၍ လက်စွဲကိုဖတ်ပြီးသင်ကြားရေးဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းတင်းကြပ်စွာလုပ်ဆောင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ မှင်စုပ်စက်နှင့်မှင်သည့်အရာတစ်ခု မှလွဲ၍ တစ်နှစ်အာမခံပါသည်။
များသောအားဖြင့် ၁ စတုရန်းမီတာခန့်အကုန်အကျခံရန်လိုအပ်သည်။ ပုံနှိပ်စရိတ်ကအရမ်းနိမ့်သည်။
ပုံနှိပ်အမြင့်ကိုဘယ်လိုညှိနိုင်မလဲ။ max ကိုအမြင့်ဘယ်လောက်ပုံနှိပ်နိုင်သလဲ
၎င်းသည် max 100mm အမြင့်ထုတ်ကုန်ကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းအမြင့်ကို software ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်အပိုပစ္စည်းများနှင့်မှင်များကိုလည်းသင်တို့၏စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်အခြားသင့်ဒေသတွင်းစျေးကွက်မှ ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်ပရင်တာကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ၃ ရက်ထက်ပိုသောပရင်တာကိုမသုံးပါက၊ ပုံနှိပ်ထားသောခေါင်းကိုသန့်ရှင်းသောအရည်ဖြင့်သန့်ရှင်းပြီးပရင်တာပေါ်ရှိအကာအကွယ်အရာများထည့်ပါ။
အာမခံချက် -၁၂ လ။ အာမခံသက်တမ်းကုန်သွားလျှင်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်သက်တာ Aftersale ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်း ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုမည်သို့သုံးရမည်၊ စက်ကိုမည်သို့လည်ပတ်ရမည်၊ နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းမှုကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်နှင့်အသုံးဝင်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာများအပါအဝင်အခမဲ့စက်ရုံများနှင့် ၃-၅ ရက်ကြာအခမဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကိုပြုလုပ်ပေးသည်။
တပ်ဆင်မှုဝန်ဆောင်မှု:တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းအတွက်အွန်လိုင်းအထောက်အပံ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာရှင်နှင့်အွန်လိုင်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုသင်ဆွေးနွေးနိုင်သည် Skype မှပံ့ပိုးမှု ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောသည်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အဝေးမှထိန်းချုပ်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အကူအညီကိုတောင်းဆိုမှုပြုပါမည်
အိတ်ဆောင် Multi အရွယ်အစားခရမ်းလွန်ပရင်တာ Inkjet Flatbed P ...
ခရမ်းလွန်ပြားပြားပရင်တာ C + W + Varnish ခရမ်းလွန်ပ ...
M-9060W ခရမ်းလွန်ဆလင်ဒါ + ပြားသောပရင်တာ
လူကြိုက်အများဆုံး rotary ခရမ်းလွန်ပြားပြားပုလင်းပရင်တာမီတာ ...